Fokon'i Asera - Wikipedia
Ny fokon'i Asera dia iray amin'ireo foko roa ambin'ny folon'i Israely. Isan'ireo foko lazaina hoe very ny fokon'i Asera.
2 Anjara tanin'ny fokon'i Asera
I Asera (hebreo: אָשֵׁר / ʾAsher) dia zanaka fahavalon'i Jakoba. I Zilpa no anaran-dreniny izay mpanompovavin'i Lea vadin'i Jakoba. Ireto ny zanaka lahiny: Imna, Isva, Isvy ary Beria. I Sera no zanany vavy (Genesisy 46.17).
Anjara tanin'ny fokon'i AseraHanova
Araka ny mpanao tsikeraHanova
Tsy dia mazava loatra ny tena sisin-tanin'i Asera raha ny Torah no dinihina satria mety tsy nanana tany fantatra ny fokon'i Asera. Na dia nisy ny fifandraisana ara-barotra tamin'i Foinikia (Fenisia) nandritra ny tantara aza i Asera dia hoatra ny tsy nisy fifandraisana tamin'ireo fokon'i Israely hafa loatra. Tsapa koa fa tsy dia voalaza ho nandray anjara tamin'ny ady nifanaovan"ny Kananita (na Kananeana) tamin'ireo foko hafa ny fokon'i Asera nandritra ny ady nifanaovan'i Baraka sy i Sisera izay tantarain'ny Baiboly. Ireo mpanao tsikera dia manatsoaka hevitra fa mety tsy nahita toerana teo amin'ny fitondrana politika tao Israely ny fokon'i Asera.
Isan'ireo foko niaraka tamin'ny Fanjakan'i Samaria ny fokon'i Asera. Tamin'ny nandravan'ny Asiriana ny Fanjakan'i Samaria sy nanaovana sesitany ny mponina tao dia tsy fantatra intsony izay nanjo ny fokon'i Asera ka izany no ilazana fa isan'ireo fokon'i Israely folo nanjavona izy. Ao amin'ny Testamenta Vaovao dia lazaina fa isan'ny fokon'i Asera i Ana mpaminanivavy sy i Fanoela rainy (Lioka 2.36).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fokon%27i_Asera&oldid=979804"
Dernière modification le 17 Janoary 2020, à 18:50
Voaova farany tamin'ny 17 Janoary 2020 amin'ny 18:50 ity pejy ity.